९६ वर्षका वृद्ध बुढा र ९६ वर्षकी वृद्धा बुढीले यसरी धुमधाम संग गरे बिहे ! हेर्नुहोस् – Sandesh Press
October 23, 2021 193
विगत केही वर्षअघि देखि निकै नै नेपालीहरुबिच सामाजिक संजाल टिकटक निकै नै लोकप्रिय छ । यहांं सबै मानिसहरुले आफ्नो प्रतिभा पस्कने गरेका छ
कति मानिसहरु यहाबाट निकै नै भा-इ-र-ल बनेका छन । त्यस्तै कयौ म्युजिक भिडियोहरु पनि यहि टिकटकबाट नै भा-इ-र-ल हुने गरेका छन । कति मानिसहरु यहाबाट निकै नै भा-इर-ल बनेका छन । त्यस्तै कयौ म्युजिक भिडियोहरु पनि यहि टिकटकबाट नै भा-इ-र-ल हुने गरेका छन । त्यस्तै अहिले
पछिलो समयमामा एउटा विवाहत जोडी खुवै भा-इ-र-ल भइरहेको छ । यो जोडी भा-इ-र-ल हुने कारण यो छ कि, उनीहरूभारतको गुजरातकी एक महिलाले ७० वर्षको उमेरमा पहिलो सन्तानलाई जन्म दिएकी छिन् । गुजरातको कुच जिल्लाकी ती महिलाले इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन(आइभीएफ) विधिबाट बच्चालाई जन्म दिएकी हुन् ।
Prev७० वर्षको उमेरमा यी महिलाले जन्माइन् पहिलो सन्तान
Nextनायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीले गरे विवाहको लिखित सम्झौता ?
हराइरहेको जहाजका को पाइलटले उड्नु अघि बुबालाई गरेको त्यो फोन कल